Malezia: Rex Judicata (Mpanjaka mpitsara?) · Global Voices teny Malagasy
Malezia: Rex Judicata (Mpanjaka mpitsara?)
Voadika ny 09 Febroary 2019 6:40 GMT
Mpiserasera Maleziana enina no voampanga tamin'ny 13 martsa 2009, araka ny tati-baovao. Mikasika ny fanevatevana nataon'izy ireo ny Sultan Azlan Shah tao amin'ny aterineto ny fiampangana. Ho voampanga ao amin'ny fanjakana samihafa ao Malezia izy enina, ny roa dia hotontosaina ao amin'ny fotoam-pitsarana ao an-drenivohitra. Notaterina ihany koa fa misy maro hafa koa ho voampanga amin'ny Alahady noho ny fandikan-dalàna tahaka izany ihany.
Ny fiampangana hatrehin'ireo olona enina (sy ny hafa) dia misy ifandraisany amin'ireo fanehoan-kevitra sy lahatsoratra bilaogy voalaza fa manevateva ny Sultan an'i Perak, iray amin'ireo fanjakana ao Malezia, noho ny krizy ara-politika sy ara-dalampanorenana any. Naneho ny tsy fahafaham-pony tamin'ny Tompo Filohan'i Malezia teo aloha ny mpiserasera satria nandray fanapahan-kevitra izay nahatonga ny Fiarahamonin'ny Olom-pirenena (ny mpanohitra ao amin'ny governemanta federaly) ao amin'ny governemantam-panjakana ho noroahan'ny Manda Nasionaly, firaisambe mitondra an'i Malezia nihoatra ny dimampolo taona izy.
Raha milaza ny loharanom-baovao iray fa ny fiampangana ireo olona dia mifandraika amin'ny fanimbana endrika ny tranonkalan'ny mpanjaka Perak, dia nisy hafa nitatitra fa tsy mazava ny hetsika tsirairay iampangana azy ireo.
Nilaza ihany koa ny tatitra fa ho voampanga araka ny fizarana faha-233 ao amin'ny Lalàna mifehy ny media marolafy sy ny fifandraisana 1998 ny olona tsirairay noho ny “fampiasana tsy araka ny tokony izy ny tambajotra na tolotra tambajotra hanehoan-kevitra, fangatahana, soso-kevitra na fifandraisana izay manambany, diso, mandrahona na manakorontana”. Toa ity no fotoana voalohany nampiasàna ity fizarana ity tamin'ny tsirairay.
Vaovao farany (13 martsa 2009): Ny fiampangana hanenjehana ireo voalaza fa meloka dia voalaza ao amin'ny fizarana 233 ao amin'ny Lalàna mifehy ny media marolafy sy ny fifandraisana 1998 noho ny “fampiasana tsy araka ny tokony izy ny tambajotra na tolotra tambajotra hanehoan-kevitra, hangatahana, hanoloran-kevitra izay kivantambatana loatra, diso, mandrahona na manakorontana”. Ahitana lamandy RM50.000 farafahabetsany na sazy an-tranomaizina herintaona farafahabetsany izany.
Noafahan'ny fitsarana ny ankamaroan'ireo voampanga ireo, ankoatra an'i Azrin Mohd Zain, 33 taona, izay niaiky fa meloka nandritra ny fotoam-pitsarana tao Kuala Lumpur ary voasazy handoa RM10,000.
Nanameloka izany fihetsika izany ny Ivontoerana ho an'ny Asa Fanaovan-gazety mahaleotena sy ny Firaisamben'ny Mpanoratra mitady ny Fahaleovantenan'ny Media, izay nilaza hoe:
CIJ and WAMI are deeply concerned that a precedent has been set for online censorship using the same law that is said to protect the free flow of information online. It goes against Malaysia's commitment of no internet censorship legislated in section 3(3) of CMA and in the Multimedia Bill of Guarantees. The violation of the promise is a sign that the government, at the brink of the impending change in prime minister-ship, is getting more authoritarian.
Miahiahy tanteraka ny CIJ sy ny WAMI fa napetraka ny ohatra ho an'ny sivana antserasera amin'ny fampiasana lalàna mitovy izay lazaina fa miaro ny fahalalahan'ny vaovao hivezivezy malalaka amin'ny aterineto. Mifanohitra amin'ny fahavononan'i Malezia ho amin'ny tsy fisian'ny fanivanana aterineto araka ny voalazan'ny fizarana faha-3(3) ao amin'ny CMA sy ao amin'ny Volavolan-dalàna Fiantohana ny Multimedia izany. Ny fanitsakitsahana ny fampanantenana no marika fa miha-didy jadona kokoa ny governemanta an-dalan'ny hanova ny ekipan'ny praiminisitra.
Nilaza ny talen'ny Amnesty International Azia Pasifika, Sam Zarifi, tamin'ny fanambarana an-gazety hoe:
This development is a serious blow to freedom of expression in Malaysia and has set a very dangerous precedent for people wishing to express their views on the internet.
Manohintohina tanteraka ny fahalalaham-pitenenana ao Malezia ity fivoaran-draharaha ity ary nametraka fisantaram-pisehoan-draharaha mampidi-doza ho an'ny olona maniry haneho ny heviny amin'ny aterineto.
Nilatsaka tamin'ny fotoana nitomboan'ny disadisa amin'ny andraikitry ny fitondram-panjaka izao fanapahan-kevitra hamelezana olona izao, ka ampangain'ny sasany ny governemanta ho miezaka manakana ny adihevitra momba izany.